Izindaba - I-GERISS Double wall slim box drawer system, ikuvumela ngekhono eliphezulu ekhishini!
I-GERISS Double wall slim box drawer system, ikuvumela ngekhono eliphezulu ekhishini!
Ngokuthuthuka kwezikhathi, abantu banezidingo eziphakeme neziphezulu zamakhabethe ekhishi. Iqoqo lekhishi elihle lekhabethe, i-hardware yingxenye ebaluleke kakhulu. I-GERISS HARDWARE ingumkhiqizi waseChina osebenza ngobuchwepheshe bekhishi lekhabethe lekhabethe. Namuhla sizokhuluma ngokuthi kungani kufanele ukhethe uhlelo lwe-slim box drawer.
Uhlelo lwebhokisi le-GERISS M02 Series slim drawer box, amaphaneli asohlangothini lwamakhabethe angama-13mm ubukhulu, yenza idilowa lakho libe nendawo enkulu yokugcina izinto. Amapaneli ohlangothini lwe-drawer ungenza umbala ngendlela oyifisayo ngokuya ngombala owuthandayo. Uhlelo lwethu lwe-slim drawer lwe-M02 Series, amaslayidi edilidi afihliwe ungakhetha ukuvala okuthambile bese ucindezela ukuvula imisebenzi emibili. Lo mkhiqizo usebenza ngemisebenzi eminingi. Ungasebenzisa isilayidi sokudicilela phansi phansi kumaphaneli asohlangothini amancane wedrowa noma abakhiqizi bokhuni. Lesi sici singenza ukuthi unciphise ingcindezi yohlu lwezinto ezikhona.
Kuma-slides we-drawer ephansi, ungakhetha kubakaki bangaphambili be-2D noma amadivayisi wokukhiya ngaphambili we-3D. Imininingwane engaphezulu ungavakashela iwebhusayithi yethu kuhttps://www.yangli-sh.com/drawer-system/ ukukhetha i-slim drawer system. Uma unemibuzo, sicela ukhululeke ukuxhumana nathi.